Manangana saina sy fanantenana · Global Voices teny Malagasy
Manangana saina sy fanantenana
Voadika ny 18 Aogositra 2015 10:46 GMT
Washington, Etazonia. 20 Jolay 2015. Olona nivory teo amin'ny masoivoho Kiobàna hahita maso ny fampakarana ny sainan'i Kiobà ao Washington D.C. 54 taona taty aoriana. Copyright Demotix.
Nisy namana iray niteny tamiko fa hahatsiaro ny zavatra nataony tamin'ny 17 desambra 2014 avokoa rehefa Kiobàna. Toy izany ihany koa aho. Tadidiko mazava tsara ny ranomaso nameno ny masoko, ny tanako kaikerin'ny vavako, natao hanakana ahy tsy hiteny mihitsy, hitazonako ny fofonaiko: satria talohan'ny fotoana nanaovan'ny filoha Barack Obama sy Raúl Castro ny fanambaràna dia nieritreritra aho fa izay zavatra rehetra ataoko amin'io fotoana io dia handrava tanteraka izany fotoana izany.
Ka dia nangina tanteraka aho. Naharitra hafiriana moa ny fotoana lanin'izy ireo hanolorana ny fanambaràna ofisialy? Tsy manankevitra amin'izany mihitsy aho. Tahaka ny mihoatra ny 50 taona aho ary tahaka ny mahatsiaro mangirifiry.
Ho an'ireo teraka Kiobàna, tahaka ahy, tamin'ny faramparan'ny ‘80s, ny fihaonana voalohany tamin'i Etazonia dia tamin'ny alalan'ny fifindran-toerana tsy dia tsara loatra. Nahazo loka “visa” ny namako akaiky indrindra tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra ka nanjavona tampotampoka, nahatonga ahy ho be fanontaniana izay tsy nisy nahasahy namaly, satria de eso no se habla. Herintaona monja taty aoriana, dia ny dadatoako mihitsy no nandao ny firenena tamin'ny alalan'ny zahatra niaraka tamin'olona 17 talohan'ny nantsoina hoe“krizin'ny mpandeha zahatra”. Ary nanomboka teo aho no nandre avy amin'ny olona mihamaro hatrany milaza fa “que el que se va, se muere”.
Amin'ny fomba iray na fomba hafa dia maty ao an-tsainay izay rehetra nandao. Eny fa na ireo miantso isa-potoana amin'ny telefonina aza dia tahaka ny lavitra dia lavitra araka ny fakanay sary an-tsaina ka mahatsapa azy ireny ho very mandrakizay izahay, fahatsapana atevenin'ny retsika ho voafandrika ao amin'ny tany kely hodidinin-dranomasina.
Tamin'ny Mey 2013 aho no sambany nandeha tao Washington, DC handray anjara amin'ny Kongresin'ny Mpianatra Amerikana Latina, lanonana iray izay anjatony ny sampana ao Kiobà no mikambana aminy. Taorian'ny fihenan'ny fifanakalozana mpianatra tamin'ireo taona nitondran'i Bush, ny ezaka nataon'ny fitondrana tarihan'i Obama hamerina azy ireo no namelàna ireo matihanina latsaky ny 30 taona tahaka ahy hizara izay hitanay momba ny zavamisy kiobàna eo amin'ny sehatra akademika isan-karazany. Ho ahy anefa ny zava-dehibe indrindra tamiko tamin'io dia natao voalohany nankany Etazonia io dia ny hiainako ny endriky ny fifanandrinana politika manan-tantara avy amin'ny fijerin'ny olona miaina amin'ny “ankolafiny ilany”.
Ka tamin'ny alina manoran'ny 23 jona 2013, roapolo taona taty aoriana, dia afa-nanatrimaso ihany ny tranon'ny dadatoako aho, fonenana vita amin'ny hazo eo afovoan'ny fiantsonan'ny fiara iray ao Miami, izay ipetrahany eo ala-trano manao ny kiendiendiny sy milaza ny tantaran'izany antsoina hoe balsero.
Tamin'ny 2014 aho dia nahazo ny lokan'ny sakaizan'i Nieman tao amin'ny Oniversiten'i Harvard University ka nifindran nankao Cambridge, Massachusetts. Nisy kely ny fanantenana fa be ny tahotra. Saingy ankoatra ny sary fotsy sy mainty soritsoritan'ny fampitam-baovao Kiobàna, dia feno fanajàna ahy ny Amerikana amin'ny tanindrazako malalako, ilay karazam-panajana nasehon'ny fakan-kevitra manerana an'i Etazonia izay ahitana fandrisihana ao anatin'ny 18 volana nanaovana fifampiraharahana tsy ankiteniteny teo amin'ny roa tonta izay nitondra nankany amin'ny fanambaràna ofisialy tamin'ny desambra lasa teo. Ary nanome fanantenana ahy izany. Saingy nifanena tamin'ny olona mino koa aho fa tokony na azo aondrana any Kiobà ny demaokrasia Amerikana, nefa tsy misy fankatoavana akory ny tantaranay lavabe anjakan'ny nasionalisma sy ny fahaleovantena.
Tamin'ny 20 Jolay, nakarina tambonin'ny masiovoho kiobàna ao Washington, DC izay nosokafana indray ny saina kiobàna. Ary omaly 14 aogositra ny sekreteram-panjakan'i Etazonia John Kerry no nankany Havana hitarika lanonana mitovy amin'izay ao amin'ny masoivohon'i Etazonia ao Havana. 54 taona taty aoriana, nihofahofa indray amin'ireo ambasadin'ilay firenena ankilany ny sainan'i Etazonia sy Kiobà. Amin'ny famerenena amin'ny laoniny tanteraka izao fifandraisana dilpaomatyka izao, dia vavolombelon'ny vanim-potoana vaovao ao Kiobà izahay. Na dia misy dia misy aza ny fahasamihafana politika, sambany teo amin'ny fiainako tsy misy ny fahavalo voatondro manokana izay tsy maintsy ivononana iadiana amin'ny fomba rehetra.
Fa ny hoavin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta dia hiankina amin'ny fahafahan'ny andaniny sy ny ankilany mamela ny fiovan'i Kiobà araka ny famindrany sy ny halakiny samirery. Tsy maintsy avy amin'ny Kiobàna ihany ny fiovana, ary tafiditra amin'izany ireo nandositra ny firenena.
Tamin'ny Desambra 2014 dia niverina tao amin'ny toerana misy ny dadatoako aho. “Ahoana ny eritreritrao amin'ny raharaha Etazonia-Kiobà?” hoy aho nanontany azy tao anatin'ny tahotra sy ny fanantenana izay nampianarin'ny krizin'ny taompolo ‘90s anay.
“Tsy politisiana aho,” hoy ny dadatoako, “Olona sisa niangana aho. . . . Saingy, mety ho marika angamba io. Fotoana izao hodiana any an-tanindrazana.”
Ny sekreteram-panjakana Etazonia John Kerry nihaona tamin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Kiobàna Bruno Rodríguez tao Havana, Kioba, tamin'ny 14 aogositra 2015, ao anatin'ny diany hanokatra indray ny Masoivohon'i Etazonia tao Kioba. Copyright Demotix.
 “Tsy miresaka an'izany isika”
 Izay olona mandao dia maty amin'ny fomba saimbolika